Torolàlana momba ny filokana baseball - Victor Mochere
Tsy toy ny baolina kitra, ohatra, ny baseball dia manana lalao bebe kokoa izay midika fa misy fomba maro ahafahana miloka sy mahazo vola. Amin'ny fitambarany, ny ekipan'ny Major League Baseball (MLB) dia samy hilalao lalao ara-potoana 2,430. Baseball dia sehatra isan-karazany amin'ny filokana ara-panatanjahantena satria manolotra ampahany maromaro amin'ny lalao hilokana rehefa mikaroka amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena an-tserasera.
Ity ny torolàlana momba ny filokana baseball farany indrindra.
4. Andininy 5 voalohany
Ny filokana amin'ny moneyline dia mijery fotsiny hoe iza no ekipa mety handresy lalao. Eritrereto hoe ny LA Dodgers dia miatrika ny Texas Rangers, ny bookies dia hanome soso-kevitra hoe iza no tiana ary iza no underdog. Mety ho toy izao izany;
Mba hahatakarana hoe iza no tiana ary iza no ambany, dia mila mijery ny marika mialoha ny isa isika. Ny mari-pamantarana minus dia manondro fa ity ekipa ity no tiana indrindra ary ny underdog dia asehon'ny famantarana miampy. Ny isa dia mifandray hatrany amin'ny $100. Noho izany, raha te hiloka amin'ny LA Dodgers tianao indrindra amin'ny -350 ianao, dia tsy maintsy miloka $350 isaky ny $100 tianao handresy. Amin'ny lafiny mifanohitra, raha miloka $ 100 amin'ny Texas Rangers ambany ianao ary mandresy dia mahazo $ 200 ianao amin'ity tranga ity. Ity no endrika fototra indrindra amin'ny filokana baseball.
Ity dia dikan-tenin'ny baseball amin'ny fiparitahana teboka. Izany dia maka ny filokana mahazatra izay ny moneyline, ary manampy tsatòka kely fanampiny ho azy. Alohan'ny lalao, ekipa iray no voafidy hanana tombony amin'ny hazakazaka 1.5 satria ny baseball dia fanatanjahantena ambany naoty. Raha maka ny ohatra avy amin'ny filokana farany isika, dia mety ho toy izao;
Noho izany, raha miloka amin'ny tiana indrindra ianao dia LA Dodgers, mila azy ireo ianao handresy amin'ny hazakazaka 2 na mihoatra. Avy eo raha maka ny underdog ianao dia ny Texas Rangers, mila resy amin'ny hazakazaka iray (latsaky ny 1.5) fotsiny ianao na handresy.
Ny baseball dia tsy mora ny maminavina, anisan'izany ny fanontaniana momba ny hoe ho naoty ambony na tsia. Ny totalin'ny filokana dia mijery ny totalin'ny hazakazaka mitambatra azo. Ny sportsbooks dia hanao tolotra mifototra amin'ny vokatry ny totalin'io. Ka amin'ny ohatra ataontsika momba ny Dodgers vs Rangers, dia mety ho toy izao izany;
Raha miloka amin'ny 'mihoatra ny 7.5' ianao dia midika izany fa maminavina hazakazaka 8 na mihoatra amin'ny lalao ianao, fa raha miloka amin'ny 'ambany 7.5' ianao dia mihevitra fa tsy hahita hazakazaka mihoatra ny 7 ny lalao.
Raha tokony hiloka amin'ny vokatra amin'ny lalao iray manontolo, dia maro no tia mifantoka amin'ny fidirana 5 voalohany. Mety hisarika ny fahalianana izany ho toy ny filaharana filaharana mahaliana na mba hialana amin'ny bullpen. Ny karazana filokana mitovy amin'izany dia azo atao, toy ny mpandresy amin'ny fidirana 5 voalohany (amin'ny endrika filokana amin'ny vola) na ny totalin'ny isa (toy ny bet total).
Ny filokana prop dia karazana filokana namboarina kokoa. Mifantoka amin'ny zavatra manokana izy ireo ary mety ho karazana faminaniana maro samihafa. Izany dia mety ho tonga amin'ny endriky ny hoe hahazo X isan'ny hitifitra na tsia ny mpilalao iray ary hahazo ny fomba fandehan'ny X, na mety ho isan'ny hazakazaka an-trano na fitokonana azon'ny mpilalao iray manokana. Izy io koa dia mandinika ny antsoina hoe futures bets, ary izany dia mety ahitana ny mpandresy amin'ny World Series, ny mpandresy amin'ny ligy Pennant, na izay ho MVP MLB.
Misy safidy maro rehefa miloka amin'ny baseball, ary misy ihany koa ny toro-hevitra maro izay afaka manampy amin'ny fampivoarana ny traikefa. Avy amin'ny fialana amin'ny ankafiziny lehibe sy ny fifantohana amin'ny underdogs divizionaly, ny fahafantarana ny toetr'andro sy ny mpitsara, dia misy zavatra kely tsy maintsy fantarina izay afaka manampy amin'ny fanaovana faminaniana marina kokoa amin'ny vanim-potoana ho avy amin'ny MLB. Miaraka amin'ny lalao maro be dia be ny baseball no tena mahasarika ny mpiloka ara-panatanjahantena. Ary ho an'ny mpankafy, ny filokana amin'ny lalao dia fomba iray hafa hanamafisana ny haavon'ny fialamboly.
Torolàlana momba ny mahandro miaraka amin'ny menaka CBD